ज्ञान बढाँउनले कष्ट नि बढाँउछ . उपदेशक १ :१८ - EL-Shaddai Family
Home Channels Daily Bread ज्ञान बढाँउनले कष्ट नि बढाँउछ . उपदेशक १ :१८
मे ५, मगंलबार
जसले ज्ञान बढाँउछ उसले कष्ट पनि बढाँउछ । उपदेशक १ ः १८
अदनको बगैँचामा हामी जाँऊ, जब सर्पले हावाले भडकाए, तब साँच्चै हावाले त्यो फल आफनो ज्ञान बढाँउने भएकाेले खाने भए र आदमलाई नि खुवाएँ । उनीहरुले परमेश्वरलाई सोधेन । परमेश्वरको आज्ञा उलङ्गन गरि पठाएँ र अनन्तमा मृत्यूको दण्ड ऋाप पाँए ।
बाईबलमा सबैभन्दा ज्ञानी भनेर राजा सुलेमानलाई चिनिन्छ जसले परमेश्वरको निगाह पाँँएको थिए । शासनकालको शुरुवातमा राजा सुलेमानले परमेश्वरको डरमा हिडे र परमेश्वरले उसको प्रार्थना सुनेर उसलाई बुद्घि दिनुभयो । माथिको उपदेश राजा शुलेमानले गल्तीकाे अनुभव गरेर लेखेको वचन हो । प्रभुलाई बिर्सेपछि आफनो ज्ञान अनुसार उसले एउटा गल्ती गरि पठाँउछ । त्यो के हो भने, उसले धेरै अन्यजाति देशका राजाको छाेरीसँग उसले विवाह गर्छ मुर्तिपुजामा डुब्छ, जुन प्रभुकाे नजरमा ठुलाे पाप हाे । उसको ज्ञानले भन्थे यदि शन्तिसँग शासन गर्नु हो भने सबै सँग असल मित्रता गर्नुपर्छ र त्यसको उपाय एउटै छ मैले उनीहरुको छोरीलाई आफनो पत्नी बनाँउनुपर्छ । दिन दिनै उसको ज्ञान र उसको प्रशंसा धेरै बढेकोले ऊ यी कुरामा लागि परे, उसले प्रभुको पवित्रतालाई शरीरिक सँग मिसाई पठाए । उसले यो कुरा बिर्सिे पठाएको थिए, परमेश्वरले उसको पिता दाऊदसँग वाचा गर्नुभएको थियो कि तेरो छोराको समयमा त्यसले तैले गरेको जस्तो लडाई गर्नुपर्दैन र उसले मेरो निम्ति परमेश्वरको वासस्थान बनाँउनेछ । यदि उसले यीे कुटनीतिक सम्बन्ध नगरेका भए पनि नि परमेश्वरले इस्त्राएललाई जोगाउनु हुने थियो। तर उसकाे ज्ञानले परमेश्वरलाई प्रार्थमिकता दिएन। धेरै जातीका पत्नीहरुले धेरै थरीका देवी देवता ईश्त्राएलमा ल्याए र राजा शुलेमान स्वंम आफैले नि पराई देवी देवता पुजे र मान्दिर समेत बनाई दिए अथवा ईश्त्राएलमा मुर्ति भित्रयाउने राजा शुलेमान आफै थिए । प्रभु कोध्रित बनी यसको बदलामा उहाँले इस्त्राएललाई दुई टुक्रा बनाईदिनु भयो । अन्तिम सास सम्म पश्चतापी जीवन जीउनु परयो।
यसकारण हाम्राे ज्ञान र विवेक परमेश्वरलाई सुम्पअाै।यो वचनलाई तपाई जाँचेर हेर्नुहोस, तपाई कुनै संसारको ज्ञानी मानिसलाई परमेश्वरको वचन सुनाँउनुहोस, उसले केही बेर सुन्नेछ तर तपाईलाई उल्टै दश वटा ज्यादा प्रश्न सोध्नेछ किनकि उसको ज्ञानले देखि कुरामा मात्रै विश्वास गर्छ, जुन कुरा उसलाई तपाई बुझाउन खोज्दैहुनुहुन्छ उसको ज्ञानले भन्छ तत्कालै यसमा केही फाईदा छैन र ऊ त्यसलाई वस्ता गर्दैन । युरोपी राष्ट्रहरु जसले परमेश्वरलाई सबैभन्दा पहिला प्रभुलाई पाँए र आज किन त्यस ठाँउमा नास्तीकवादको संख्या बढै जाँदैछ, किनकि उनीहरुमा शिक्षा र ज्ञानको मात्रा ज्यादा पाईन्छ र सबै प्रशस्ता छ । उनीहरु आफनो ज्ञानले प्रकृतिक र देखी कुरामा लाँउदछ र परमेश्वरलाई वस्ता राख्दैन ।
आजको हाम्रो प्रार्थना यो हनुपर्छ, हे प्रभु मेरो यो ज्ञान, हजुरकै कामको लागि खर्चिनु सकौं र सबै कुरामा हजुरलाई प्राथमीकिता दिन सकौं । मेरो हर कदममा तपाईलाई सोध्न सकौं । परमेश्वरको ज्ञानको सर्वश्रष्तता कति उदेकको पाँउछु, तपाईले हरेक पापमा गिरेको म जस्ताे व्यक्त्तिलाई बाच्ने उपाय र ठिक समय तोकिदिनुभएको रहेछ। धन्यवाद , अामेन ।
Previous articleएक-अर्कालाई प्रेम गर
Next articleCHRISTMAS PROLOGUE
Spiritual Poem May 21, 2020